Mushure mekurambidzwa kwaTrump, China iri kugadzirira matanho akafanana | Linux Vakapindwa muropa
Beijing yakazivisa chinangwa chayo chekugadzira yakasarudzika makambani ekunze izvo zvinoonekwa sekutyisidzira kuchengetedzeka kwenyika kana kuita zvinopesana neChina bhizinesi. Runyorwa, yakaratidza kuva nzira yekutsiva yesarudzo yehutongi hwaTrump kurambidza maChinese maapplication TikTok uye WeChat kubva kuUS mashopu eSvondo.
Kunetsana pakati peBeijing neWashington kwawedzera mumwedzi ichangopfuura, kumhanyisa kudzikira kwehukama nehupfumi. Iyo standoff ikozvino inosanganisira nyika dzese kutengeserana uye tekinoroji marongero, pamwe neTaiwan, Hong Kong, kodzero dzevanhu uye zvimwe zvinhu.
Zviito zvizhinji zvenguva pfupi yapfuura yeUS vakurudzira China kupindura. Hondo yeVanhu Yerusununguko yakatumira jeti dzehondo 19 nemabhomba kuTaiwan Strait nemugovera uye 18 zuva rapfuura kuratidzira kushanya kwemukuru wedhipatimendi kushanya kuchitsuwa chegutsaruzhinji, icho chinonzi neChina inzvimbo yaro. Mamiriro.
Pamusoro pekurambidza TikTok uye WeChat, hutongi hwaTrump hwadzivirira gumi nemaviri iwayo Chinese makambani anotenga zvigadzirwa zveAmerica. Dhipatimendi reCommerce rakawedzera chiChinese tech hofori yeHuawei kune "Entity List" yayo gore rapfuura, ichitadzisa kugona kwekambani kushandisa machipisi akagadzirwa neUS, software uye humwe hunyanzvi.
Ministry of Commerce yeChina yakaburitswa Mugovera mitemo inotsanangura i "rondedzero yakafanana yezvinhu zvisina kuvimbika", kunyange hazvo isina kutaura nezvemamwe makambani kana vanhu vanozoverengerwa.
Mitemo, iyo yakatanga kushanda nekukasira, inotaura kuti masangano ekunze pane akanyorwa Vanogona kurambidzwa kubva kunze kana kuendesa chero chinhu kubva kuChina kana kuisa mari munyika.
Makambani Vanogona zvakare kubhadhariswa faindi uye vashandi vavo vanogona kurambidzwa kupinda kana kushanda kuChina. Zvimwe chete izvi zvinoenda kune avo vanotova nemvumo yekushanda, mvumo yekugara kana mvumo yekugara, magwaro ese aya anogona kubviswa. Makambani anofarira anogona kusakwanisazve kuunza munyika chero zvinhu zvinozovashandira mumabasa avo (vashandi, mota dzekambani, nezvimwewo).
China inoenderera mberi inoratidza kuti rondedzero yezviyero haina kukwana; Mamwe matanho anogona kutorwa kana 'zvakakodzera'
China inoshora kutonga kweTrump kurwisa WeChat uye TikTok
Mune chirevo chakasiyana neMugovera, Dhipatimendi reCommerce rakashora zviito zvehutongi hwaTrump kurwisa WeChat neTikTok, vachiti kuita kwakadai kwakanganisa chimiro cheUnited States senzvimbo yekudyara kwekunze.
"United States yakarambidza mashandisirwo ane chekuita neWeChat neTikTok zvikumbiro zvemafoni nezvikonzero zve'chengetedzo yenyika ', zvichikanganisa kodzero nemakambani zviri pamutemo zviri pamutemo nekuvhiringidza kurongeka kwemusika. China inopikisa zvakasimba.
“Pasina humbowo, United States yakaramba ichishandisa simba renyika ku'vhima 'nekutsikirira makambani maviri ataurwa pamusoro apa nezvikonzero zvisina musoro, zvichikanganisa mashandiro emakambani akajairika uye nekudzikisira kuvimba kwevatengesi vepasirese mune zvakatipoteredza. Mari yekuAmerica. Kuparadza hurongwa hwepasi rose hwehupfumi uye hwekutengesa hachisi chinhu chakajairika.
Uye izvi zvinotikanganisa here?
Chokwadi, hongu, kubvira China ndiyo nyika hombe inogadzira uye inotungamira kugoverwa kwepasirese kwerunyorwa rurefu rwezvigadzirwa zvinodiwa neAmerica, kusanganisira simbi dzemagetsi emutengi. Asi kutyisidzira kweBeijing kucheka kunze kwenyika kunogona kukanganisa mukurumbira weChina semutengesi akavimbika, asi zvinogona zvakare kukwidza kukwira kwemitengo pazvinhu zvakasiyana siyana.
Marudzi akawanda akagadzira China yavo yekugadzira base kuburitsa zvinhu nekukasira, hupfumi uye zvinobudirira. Kunze kwenyika kudyara muChina hakuna kungogadzira makumi emamirioni emabasa munyika, asi kwakawedzerawo ruzivo rwayo rwekugadzira zvinhu.
Makambani ekunze ane zvakawanda zvekurasa kana China ikafunga kuvawedzera kune yavo nyowani nyowani nhema.
Apple, semuenzaniso, inounganidza mazhinji ezvigadzirwa zvayo mukati. Mwaka wadarika, iyo Greater China dunhu yakaverengera yechitanhatu yekutengesa kwekambani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mushure mekurambidzwa kwaTrump, China iri kugadzirira matanho akafanana
Vanofanira kurambidza Microsoft ...
Fu Manchu akadaro
"Makambani ekunze ane zvakawanda zvaacharasikirwa kana China ikafunga kuwedzera kune avo vatsva mazita."… Uye China icharasikirwa zvakare nekubvisa mari kubva kumakambani iwayo. China inogona kuve inogadzira zvikuru chero zvazvingava, asi kana isina munhu wekuitengesera, zvakafanana nekutora matombo. Apple ichaunganidza zvigadzirwa zvayo muUS, zvinova ndizvo zvinotarisirwa naTrump, ichashandisa zviuru zvevanhu vekuAmerica, uye Apple icharamba ichitengesa zvigadzirwa zvayo kunyangwe zvichidhura. Chinhu chisingawanzo kuve nebasa kune vashandisi vayo, nenzira. Nyika dzepasi rose dzichango shandura dzimbahwe radzo nekuenda kune dzimwe nyika dzakaita seVietnam, Malaysia kana India uye dzinogona kutotamira kuAfrica uko mitengo yekugadzira inowanzo kuve isina basa uye hurumende dzayo dzinogona "kukurudzirwa" zviri nyore. Veto inogona neUnited States nevabatsiri vayo vemakambani eChinese inogona kuzunza anopfuura chiChinese.
Pindura Fu Manchu
Vazhinji vanokanganwa kuti China yave nemakore ichirambidza kunyorera kubva kune dzimwe nyika kupinda mumusika wayo, kuve hutongi hwechiKomonisiti hunodzora zvese zvinodyiwa nevashandisi veChinese, United States iri kungopindura izvozvo.